LANDA I-CLOWN FISH 4.56 YE-SKYPE - UKUBUYEKEZA KOHLELO - 2019
Main Ukubuyekeza kohlelo
Ufuna ukuhlekisa ngabangani bakho noma osebenza nabo? Noma lungisa izwi lakho ngokwenza lokho ongathanda? Zama uhlelo lwe-Clown Fish yamahhala. Uzokuvumela ukuba ushintshe izwi lakho ngaphandle kokuqaphela.
I-Clownfish isebenza ngokubambisana ne-Skype iklayenti yokuxoxa ngezwi. Vele ugijimise i-Clownfish, ukhethe imiphumela oyifunayo ngokuchofoza okumbalwa bese ucelwa ku-Skype - abangani bakho bayomangala kakhulu lapho bezwa izwi lakho elisha.
I-Clown Fish inesisindo se-megabyte kuphela futhi yisicelo esincane esisebenza ku-tray system ye-Windows (ngezansi kwesokudla kwesikrini). Lolu hlelo lukuvumela ukuba ulalele inkulumo yakho, ukuze umsebenzisi angakwazi ukulawula ukuthi izwi lakhe lishintshile kanjani.
Isifundo: Ungashintsha kanjani izwi ku-Skype usebenzisa i-Clownfish
Sincoma ukubona: Ezinye izixazululo zokushintsha izwi kumakrofoni
With Fish Clown, ungakwazi kalula ukushintsha ithoni. Isibonelo, ungenza izwi lakho libe ngowesifazana noma lesilisa, intsha noma ifana ne-monster.
Uhlelo lukwazi ukwenza ngokwezifiso umsindo wezwi: ungenza izwi liphakeme noma liphansi ngangokunokwenzeka.
Ungasebenzisa imiphumela eminingana ngezwi lakho. Imiphumela njenge-echo, i-echo eminingi ne-chorus iyatholakala lapha. Ungaphinda uxhume imiphumela yenkampani yangaphandle usebenzisa i-VST-plug-ins, uma ungenayo imiphumela ejwayelekile ejwayelekile.
Ungangeza noma yikuphi umsindo wangemuva enkulumweni yakho: kusuka kumisindo ehlukahlukene, njengomsindo wesitaladi, kumculo. Vula uvule ifayela elizwakalayo kukhompyutha yakho.
I-Clownfish ikuvumela ukuba ulungise ivolumu yomsindo wangemuva, futhi ungangeza amafayela amaningi omsindo ngesikhathi esisodwa, okuzodlalwa ngokulandelana.
Ukuhumusha kwemilayezo ku-Skype
I-Clownfish inezici eziningi ezengeziwe ezikusiza ukuxhumana ku-Skype. Unganika amandla ukuhumusha okuzenzakalelayo kwemiyalezo, kokubili okungenayo nokuphumayo. Kukhona izwi lezwi lomyalezo wezwi lomyalezo.
1. Ukubukeka okulula kanye nosayizi omncane wesicelo;
2. Ukuba khona kwenani leminye imisebenzi eyengeziwe ukusiza uma uxhumana ku-Skype;
3. Ulimi lwesiRashiya luyatholakala.
1. Isebenza kuphela nge-Skype. Shintsha izwi kwezinye izinhlelo zokusebenza usebenzisa iClownfish ngeke uphumelele. Ukuze wenze lokhu, zama i-AV Voice Changer Diamond noma i-MorphVox Pro.
Ukushintsha izwi ku-Skype ngeke kube inkinga kuwe uma usebenzisa i-Clownfish. Lolu hlelo kulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi lulungiselele, ngokungafani nabanye abamele abaningi bale ngxenye.
Landa i-Clownfish mahhala
Landa inguqulo yakamuva yohlelo kusuka kusayithi elisemthethweni
Indlela yokusebenzisa i-Clownfish Ungashintsha kanjani izwi ku-Skype usebenzisa i-Clownfish I-Clownfish ayisebenzi: izimbangela nezixazululo Shintsha izwi lakho ku-Skype
Yabelana ngalokhu ku-amanethiwekhi omphakathi:
I-Clownfish iyisicelo esiwusizo kakhulu sokushintsha izwi ohlelweni oluthandwayo lokuxhumana nge-Skype, futhi kumkhiqizo kunenqwaba yemisebenzi eyengeziwe, hhayi emincane.
Uhlelo: Windows 7, 8, 8.1, 10, XP, Vista
Isigaba: Ukubuyekeza Uhlelo
Umthuthukisi: Amalebhu Shark
Usayizi: 1 MB
https://termotools.com zu.termotools.com © Ukubuyekeza kohlelo 2019